စိတ်ကြိုက်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကုန်ပစ္စည်းများမဂ္ဂနီစီယမ် Aolly Casting သေဆုံး China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die,မော်တော်ယာဉ် Cast အမျိုးမျိုး,Process ကိုအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die > စိတ်ကြိုက်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကုန်ပစ္စည်းများမဂ္ဂနီစီယမ် Aolly Casting သေဆုံး
စိတ်ကြိုက်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကုန်ပစ္စည်းများမဂ္ဂနီစီယမ် Molly, မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die Casting Die, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်ကုန် ချ. ၎င်းသေဆုံးစိတ်ကြိုက်နိုင်ရန်အတွက်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း၏အချိုးအစားအားလုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသတ္တုစပ်များတွင်အများဆုံးပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောသေ-သတ္တုများပုံသွန်းတဲ့သတ္တိလည်းရှိတယ်, နှင့်သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း၏အထူ 0.5mm အဖြစ်နိမ့်ဆုံးအဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်များအတွက်သေ Cast အမျိုးမျိုးလုပ်သင့်လျော်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းနည်းပညာ ချ. စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်သေသွားတယ်။ တစ်ဦးအရင်းအနှီးနှင့်ပစ္စည်းအထူးကြပ်မတ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ထိုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကုန်ကြမ်းစျေးနှုန်းများ၏အနိမ့်အဆင့်အတိုင်း, foundry စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုဟာမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်မည်, စျေးကွက်ပို အဆင်သင့်။